Dhawunirodha chirongwa chekugadzira t-shirts | Gadget nhau
Kana iwe uchida kugadzira mbatya dzako kana kuda kuve neyako nguo dzakasarudzika, pane chirongwa chinogona kushandiswa gadzira yako wega hembe shati.
Zviri nyore kuwana, kubva download, uye gadza. Uye zvakare, chirongwa ichi chinokutendera iwe kugadzira yako fashoni ine 3D mamodheru. Icho chirongwa chekuti iwe unogona kugadzirisa yako modhi, kunyangwe iri yekuchinja bvudzi bvudzi, makeup, pakati pezvimwe zvinhu; uye mukuwedzera pakukwanisa kusarudza mhando yezvipfeko, mamodheru, mavara, mapatani, nezvimwe. Ichi chirongwa chinonyanya kubatsira kune avo vanhu vanoda kugadzira yavo t-shirts, kungave kwako wega, mhuri, kutengesa kana kupa.
Zvese izvi nezvimwe zvinhu zvatinogona kuzadzisa, nekutenda Virtual Fashoni Nyanzvi, zvinova vakasununguka uye inobatsira zvakanyanya mune idzi kesi. Chimwe chezvinhu zvekuburitsa pachena chirongwa ichi ndechekuti iri mu español saka hazvizove nyore nyore kunzwisisa yako kushanda kamwe uchinge uri mukati maro.
1 Mobile mapurogiramu
2 Zvirongwa zvemakomputa
3 Mapeji epamhepo
4 Maitiro ekugadzira t-shirt
5 Zvinodhura zvakadii kugadzira t-shirts?
Kugadzira t-shirt chinhu chatingaitewo kubva kunharembozha yedu. Kune mafomu anoita kuti izvi zvikwanisike, saka iri imwe sarudzo yakanaka yekutarisa, nekuti kune vazhinji vashandisi zviri nyore kwazvo kuti vakwanise kuita izvi kubva pafoni yavo. Pane akati wandei sarudzo dziripo paGoogle Play, iyo ingave inofadza mune izvi.
Yekutanga ndeye Dhizaini uye purinda yako t-shati, inova iri nyore yakapusa app yatinogona kugadzira t-shati dhizaini kune kwedu kufarira. Uye zvakare, iyo zvakare inokutendera iwe kuti gare gare ugadzire faira kana fomati iyo inogona kudhindwa gare gare, kuti itibatsire isu mune ino maitiro nenzira inoshamisa. Dhizaini yeapp iri nyore uye inoshanda nemazvo. Inogona kutorwa pasi mahara kubva kuGoogle Play:
Dhizaina uye purinda yako t-shati
Kune rimwe divi isu tine T-shati dhizaini - Snaptee, iyo ingangodaro inonyanya kuzivikanwa uye veteran mune ino ndima. Iyo inotipa isu mukana wekugadzira tsika t-shati kubva pakutanga. Tichakwanisa kusarudza zvatinoda mupfungwa iyi, kubva kumavara, kudhinda kana kupedzisa. Nekudaro, kuve neyako dhizaini kuri nyore. Inogona kutorwa pasi mahara paApple:
Dhizaini yeT-shati - Snaptee
Mukugadziri: Snaptee Yakatemerwa
Kana iwe uchida kugadzira hembe kubva pakombuta yako, zvinoita zvakare kushandisa mamwe mapurogiramu. Kushanda kwavo kwakafanana nezvatinazvo muapp foni, chete mune ino kesi isu tinoshandisa chirongwa pakombuta. Ivo vanotibvumidza isu kuita yese yekushandisa dhizaini dhizaini, kuti tikwanise kunakidzwa ne100% tsika t-shati.
Mune ino kesi, kusarudzwa hakuna kupamhama, kunyangwe paine chirongwa chinonakidza kwazvo, chii chinonzi Desktop T-Shirt Musiki. Ichi chirongwa chinotibvumidza isu kuti tigadzire isu t-shirts zviri nyore kubva kumakomputa. Tinogona kugadzirisa zvese nezve dhizaini, kudzamara tawana iyo yatiri kuda. Nyore kushandisa uye yakanaka sarudzo yekufunga.
Iyi ndiyo sarudzo yakura zvakanyanya kupfuura nguva. Takasangana na akawanda mapeji ewebhu maari ekugadzira zvigadzirwa yeakazara akasarudzika t-shirts. Ingo tsvaga neGoogle kuti uone kuti pane zvakawanda zvingasarudzwa zvinowanikwa mune izvi. Uye zvakare, mashandiro mavari akafanana, saka hatizove nematambudziko akawandisa mune izvi.
Imwe yeakanyanya kufarirwa ndiTespring, zvatingaone mune iyi link. Pane ino peji tichakwanisa kugadzira dhizaini yatinoda, tichisarudza pakati pemaitiro akasiyana e t-shirt, kugadzira mavara atinoda kushandisa uyezve iwo mavara atinoda kuisa pairi. Zvese izvi zvinobvumira 100% yakasarudzika dhizaini. Uye zvakare, zvinoenderana nezvakawedzerwa izvo zvatinowedzera, tinogona kuona mutengo uyo wakati shati inodhura.
T-shati, mune iyi link iripo, ndiyo imwe sarudzo yekutarisa mune ino chikamu chemusika. Iyo inotipa isu mukana wekuti tigadzire t-shirts kune kwedu kufarira. Iyo yakanaka webhusaiti kana isu tichida kugadzira akati wandei mayuniti, sezvingave zvirizvo kana zviri zvechiitiko chakati, semuenzaniso. Nzwisisa kushandisa uye kazhinji zvakanaka mutengo.
Spreadshirt ndiyo yechitatu webhusaiti yatataura, inova imwe sarudzo yakanaka yekufunga. Izvo zvichatipa isu mukana wekugadzira dhizaini yatinoda pahembe. Uye zvakare, iri nyore kushandisa webhusaiti, kugona kugadzira ma-t-shirts emhando dzese dzevanhu (vakuru kana vana). Tinogona zvakare kusarudza zvese nezve hembe, senge zvinhu. Izvo zvinotobvumidzwa kugadzira ecological t-shati, iri zvirokwazvo inonakidza kwazvo. Sarudzo huru, kuti iwe unogona kushanyira pano.
Maitiro ekugadzira t-shirt
Maitiro acho anowanzo fanika pamapeji ese ewebhu. Tinofanira kudaro sarudza zvimwe zvinhu kutanga, senge zvinhu zvatiri kuda kushandisa muhembe uye neruvara. Saka kuti mushandisi wega wega anogona kusarudza yaunoda sarudzo. Kune mamwe mapeji ane mamwe mavara, asi kazhinji hazviwanzo kuve dambudziko.
Chinhu chakajairwa ndechekuti inogara ichibvumidzwa kugadzira yakasarudzika zvinyorwa, kusanganisira mukana wekusarudza font Tinogona zvakare kuunza mapikicha kana marogo mukati mayo, ayo mune dzakawanda kesi isu tichafanirwa kuisa kubva pakombuta, saka zvakakosha kuve neyedu yakachengetwa faira iyo yatinoda kushandisa mune ino kesi. Kunyangwe mazhinji eiyo mapeji kana zvirongwa zvakare zvine zvinhu zvatinogona kushandisa, kana isu tichida kuunza maumbirwo. Chinhu chinowanzoitika ndechekuti iwe unofanirwa kubhadhara kune huwandu hwezvinhu zvatinoshandisa.
Nenzira iyi, isu tinogona kumisikidza dhizaini yeiyi hembe mukuda kwedu nguva dzese. Kana tangopedza, isu tichafanirwa chete kusarudza saizi uye zvikamu izvo zvatinoda kubva mune ino hembe, uye nekudaro isu tigoziva mutengo uyo unoita dhizaini dhizaini. Mapeji mazhinji anowanzo kudzikisa mitengo kana mamwe mauniti akarayirwa.
Zvinodhura zvakadii kugadzira t-shirts?
Kugadzira t-shirts hakuna kudhura. Mazhinji mapeji anowanzo famba pamamaki akafanana, ayo ari pakati pegumi kusvika makumi maviri euros. Kunyangwe zvinoenderana nezvinhu zvakawanda, unova ndiwo mutengo wekupedzisira wehembe yataurwa. Kune rimwe divi, izvo zvishandiso zvatinoshandisa zvine mutsindo, nekuti zvimwe zvinodhura, kunyanya kana tichitengesa hembe yezvakatipoteredza, sekutenderwa kwezvimwe zvitoro.
Iwo mavara anogona zvakare kukanganisa, sezvo mamwe mavara akaomesesa kugadzira uye kune mapeji anobhadharisa yakawanda. Asi ivo havawanzo kuve mutsauko wakakura mune izvi. Pakupedzisira, izvo zvinhu zvatinoshandisa, zvakadai semifananidzo, mifananidzo, marogo, nezvimwe.. Izvi zvinoreva kuti mutengo wehembe yataurwa inogona kuve yakakwira. Mamwe mapeji anobhadharisa nechimwe chinhu, nepo vamwe vachitibhadharisa kamwe. Imwe neimwe ine maitiro ayo.
Aya ndiwo maficha anobatsira pamutengo wawo, asi usazviita zvakanyanya kudhura. Kugadzira t-shirts chinhu chiri mukati mekusvikira kwemahombodo ese. Naizvozvo, kana iwe wanga uchifunga zvekugadzira yako dhizaini, iwe uchaona kuti icho chinhu chiri nyore uye chisingadhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Dhawunirodha chirongwa chekugadzira t-shirts
Pindura kuna jaiko
zvakanaka chirongwa chichaishandisa. Ndatenda.
ps Ini ndinongoda kurodhaunura kuti nditi hembe
unotora sei chirongwa ichi ndiudze xfa
Chirongwa chinogona sei kutorwa pasi?
mafungiro hama akadaro
Ini ndoda chirongwa chekugadzira makombi chirongwa chandinogona kushandisa icho chisiri Photoshop kana hofmman
Pindura kune hunhu hama
Cloudya: Yakanakisa gore nhare mbozha